Global Voices teny Malagasy » Soavaly “Trojan” Rosiana Mankany Okraina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Aogositra 2014 3:44 GMT 1	 · Mpanoratra Aric Toler Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Okraina, Rosia, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hehy, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Akon'ny RuNet
Fanamarihana mialoha avy amin'ny mpandika lahatsoratra ho amin'ny teny malagasy: Ny soavaly “Trojan” (vakio hoe toroàhianina) izay fantatra amin'ny teny frantsay hoe “cheval de Troie” dia noraisina avy amin'ny tantara nosoratan'ilay Grika mpamerin-teny antsoina hoe Homère  gr:Ὅμηρος anisan'ny mpandrafitra ny literatiora sy ny fomba fitenenana sy fandaha-teny tandrefana amin'ny ankapobeny.
Ora vitsivitsy monja taorian'ny fampitandreman'ny OTAN fa mety “mety hitranga ” ny fanafihan'i Rosia an'i Okraina ao ambadiky ny fanomezana fanampiana fifamonjena mahaolona, dia nanambara i Moskoa fa hisy ny iraka alefa any Okraina atsinanana hitondra fanampiana. Niteraka fifanenjanana teo amin'ny faritra ny fanapahan-kevitr'i Rosia, saingy tsy ela taorian'izany dia nanambara  ny filoha Okrainiana Poroshenko fa nifampiresaka tamin'ny filoha Obama amin'ilay iraka fifamonjena mahaolona izy, tamin'ny famoahana fa handray anjara amin'izany ny Vokovoko Mena. Rosia—miaraka amin'i Etazonia, Alemaina, ary ny firenenkafa—no handray anjara ao anatin'ny vondrona iraisampirenena hitondra fanampiana ao Luhansk.
Indrisy anefa fa tsy misy ny mora pasohana tahaka izany eo amin'i Okraina sy i Rosia. Tamin'ity maraina ity (talata), nilaza i Okraina fa holaviny ny fidiran'ny “convoy” fiarabe miray lalana/miara-dalana miisa 280 avy any Rosia, izay lazaina ho mitondra fanampiana mahaolona anarivony taonina . Miahiahy amin'ny fikasan'i Rosia ny miaramila Okrainiana, milaza fa miandry ny Vokovoko Mena aloha hanamarina ny ao anatin'ireo fiara rehetra ireo.
Ny hafa lasa nanamarina any amin'ny hafatra tsy voamarina mivoaka any amin'ny media sosialy rosiana ny porofon'ny tetikadin'ny soavaly “Trojan”. Nanangona sary avy amin'ny pejy iray ao amin'ny VKontakte efa voafafa, nampiseho fiara miaramila voaloko fotsy ny mpisera LiveJournal Andrei Malgin . Namoaka sary miaraka amin'ny hafatra ilay mpiserasera tamin'ny fanoratana hoe “Fanampiana mahaolona hoan'i Donetsk sy Luhansk,” mifanindran-dalana amin'ny sary hafa izay mampiseho mazava ny fisian'ny miaramila ao amin'ny faritra. Tsy porofo tsy azo lavina ireo sary ireo, fa mbola mametraka indray fa sarotra mandray lesona ireo miaramila rosiana amin'ny mahazava-dehibe ny tsy fisehosehoana ao amin'ny media sosialy .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/08/13/63134/
 mety hitranga: http://in.reuters.com/article/2014/08/11/ukraine-crisis-idINKBN0GB1DE20140811?feedType=RSS&feedName=worldNews
 anarivony taonina: http://www.nytimes.com/2014/08/13/world/europe/russian-convoy-leaves-moscow-for-ukraine-bearing-aid.html?_r=0
 mpisera LiveJournal Andrei Malgin: http://avmalgin.livejournal.com/4786695.html
 mahazava-dehibe ny tsy fisehosehoana ao amin'ny media sosialy: https://globalvoicesonline.org/2014/07/31/russia-ukraine-selfies-military-attack/